Jabuuti oo soo dhaweysay qaxooti Yameniyiin ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti oo soo dhaweysay qaxooti Yameniyiin ah
31st March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa qaabishay qaxoonti ku dhaw 700 oo ruux kuwaasoo ka barakacay colaadda ka aloosan dalka Yemen.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegtay iney u diyaar garowday soo dhaweynta qaxootiga yameniyiinta ah ee ka baxsanaya coladda ka taagan dalkooda.
Waxaa kulan Jabuuti ku yeeshay wasiiro ka tirsan dowladda Jabuuti iyo iyo hay’addaha samafalka iyo xuquuqal insaanka, iyadoo looga hadlay sidoo dhulka Jabuuti loogu soo dhaweyn lahaa qaxootiga Yemeniyiinta ah.
Kulanka oo ay ka qeybgaleen Xasan Cumar Maxamed, Wasiirka Arrimaha gudaha Jabuuti iyo Dr Qaasin Isaaq Cismaan, Wasiirka Caafimaadka, ayaa la iskula gartay in si fiican loo qaabilo dadka dhibaatada Yemen ka soo yaacay lana dejiyo degaanka Obokh oo loogu diyaariyay cunto, waxay huwadaan iyo meelo ay degaan.
“Diyaar baanu u nahay inaanu qaabilo Qaxoontiga Yemen, waxaanu qaabilay 686 oo Jabuuti soo gaadhay, 502 Diyaaradda ayay ku yimaadeen 184 kale oo badda ka soo degay iyo 27 Obokh jooga oo 9 caruur ahi ku jirto, Dawladda Jabuuti waxay qaadatay go’aanka ah inay qaabisho Yemeniyiinta dhulkeena ku soo qaxday” ayuu yiri Wasiirka Daakhiliga Jabuuti, Xasan Cumar Maxamed.
Dhanka kale, dekedda Berbera waxaa soo gaaray 32 Yemeniyiin ah sida Hay’adda Qaxoontiga Aduunka ee UNHCR sheegtay.
Lama sheegin in dadkaas uu maamulka Somaaliland dejin doono goob u gaar ah iyo iney usii gudbi doonaan dalal kale.
Dalka Yemen waxaa col ka abuuray kooxda Shiicada ee loo yaqaano Xuuthiyiinta, kuwaaso madaxweynaha ka ceyriyey dalka, taasina keentay in Isbaheysi uu Sacuudigu hogaamiyo ay maalintii 6-aad cirka ka duqeynayaan.
Shalay ayaa 45 qof ku dhinteen duqayn lala beegsaday xero qaxooti gudaha dalka Yemen, taasoo sii badineysa cabsida dadka rayidka, iyadoo ay taa sii dheertahay kala cabi la xiriirta qoloqolada dadka Reer Yemen oo kala ah Sunni iyo Shiico.
Nigeria: Jen. Buhari oo ka codad badan G. Jonathan
Nin Nabadoon ah & xaaskiisa oo lagu dilay Baydhabo